Mjuxuu boolisku samayn karaa? - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Mjuxuu boolisku samayn karaa?
Weligaa ma laguu gaystay dagaal ama weerar, miduun dhawaan ama muddo ka hor? Boolisku waxa uu siin karaa talo iyo hagitaan, qaadaa casbashada rasmiga ah oo qiimeeyaa baahiida dhowrida.
labbadaba dagaalka xidhiidhka dhow ah iyo weerarka galmada waa dembiyo ciqaab leh kuwaas uu xil kasaaranyahay boolisku inay baadhaan. Ka warbixinta dembiga waxay noqon kartaa tallaabo muhiim ah oo dhanka ka bixida xidhiidh dhibaato leh ah.
SIDA AAD ULA KULMEYSO BOOLISKA:
Boolisku waa inuu ogsoonaadaa in dembiga ciqaabta leh uu dhacay si loo fara geliyo oo loo baadho. Tani waxay noqon doontaa mid adiga ku soo marta, dhibaha, ka warbixinta dembiga, ama qof kale oo ku wargelinaya booliska iyagoo ku metelaya. Haddii dembiga ciqaabta leh uu dhacay wakhti hore - oo waalidka ama dembiilagu ay dhinteen -- weli waad ka warbixin kartaa dembiga.
> liiska magacyada marka laga warbixinayo
Marka boolisku helo macluumaad ku saabsan xaalad halis ah, waxay marmarka qaarkood awood u yeelan karaan inay bilaabaan baadhitaanka oo ay bilaabaan dacwada dembiga iyaddoonay jirin cabasho rasmi ah oo uu sameeyay dhibanaha kufsigu. Tan waxaa loogu yeedhaa “dacwad oogista dad waynaha”
Maaha inaad go’aan ka gaadho inaad ka warbixiso dembiga ka hor la xidhiidhka booliska
Boolisku waxay sidoo kale noqon karaan lamaane wada shaqayn wanaagsan oo waxay bixin karaan talo iyo hagitaan. Maaha inaad go’aan ka gaadho inaad ka warbixiso dembiga ka hor la xidhiidhka booliska, mana aha inaad sheegto magacaaga ama magaca kooxo kale kuwaas oo ku lug leh. Boolisku waxay bixin karaan turjubaan marka ay lama huraanka tahay.
Haddii laguu hanjabo, boolisku waxay kaala fekeri doonaan adiga xalalka oo waxay qaadi doonaan tallaabooyin ka hortag ah, marka ay lama huraanka tahay.
> tallaaboooyinka ka hortaga ee dadka la gaadhsiiyay dagaal ama hanjabaad.
Haddii ad khatar darran ku jirto, ka wac booliska 112
La xidhiidh boliskaaga xaafada: 02800